Chinese kopi yeApple Watch, iyo Aiwatch | Ndinobva mac
Zviripachena kuti maChinese makopi ari chikamu cheazvino tekinoroji uye isu tese takashandiswa kuona Mac zvishandiso uye kunyanya iOS yakanyatsoteedzerwa nemakambani eChina. Iri idambudziko mune zvimwe zvinhu uye kunyangwe isu tese tichishamisika kuti makambani ane hupfumi hwakadai seApple, haashori mhando idzi dzevagadziri, asi zviri pachena kuti hapana kurwa kunokwanisika nekuti makopi aya anotenderwa kuChina.
Kurega parutivi zvinodairwa uye nemamwe matambudziko echigadzirwa, tinogona kutaura kuti kana iyo AiWatch iri sekuratidzwa mumifananidzo ichave iri chaiyo kopi yeApple smart wachi, asi inoramba ichibatwa kuratidza izvi. Zviripachena, izvo zvekuvakisa hazvina kufanana uye hazvizove neyakaenzana mashandiro, asi zvine mutsindo zvakateedzerwa.
Iwo maratidziro eiyi Chinese kopi akanaka chaizvo kana isu tikateerera kune zvavanotaura pawebhu, ine application yekuenderana neiyo iPhone uye zvakare ine sensor kuyera kurova kwemoyo. Chimwe chokwadi chekutarisa ndechekuti inobvumidza kutora mifananidzo kubva paawa, ndiko kuti, tinodzvanya bhatani remuviri uye yedu iPhone yaizotora kubatwa. Iyo ine bhatiri iyo inobvumidza iyo kuve kweanosvika maawa gumi nematanhatu uye ine modhi yekudengenyeka kana tikasuduruka kubva pachigadzirwa uye iyo Bluetooth haina kubhadharwa.
Ehezve, iyo skrini iri mono-ruvara uye ndosaka vachifungidzira kuzvitonga kuzhinji pawebsite yemugadziri, inowanikwawo mumhando dzakasiyana dze tambo. Chekupedzisira tinogona kuratidza mutengo wewachi, chimwe chinhu chinotitaurira zvakananga kana tiine njere dzekuti hatifanire kuitenga, iyo AiWatch ine mutengo we399 Yuan, inova inenge 61 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple wachi yatove neChina kopi, iyo AiWatch